Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (2)
Q and A October 2010 (2)
1. သားလေးက ၁ နှစ် ၂ လ ရှိပါပြီ
2. နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ အဖြူရောင် အဖုသေးသေးလေးတွေက
3. ဗိုက်ခွဲ မွေးထားသူတွေကော လုပ်လို့ရပါသလား
4. ကျွန်မ Ecee2 ကို ၁၃ ကဒ်ခန့် သုံးစွဲပြီးပါပြီ
5. What is the right or good healthy position of penis
6. ဖြစ်တာကတော့ ကျွန်တော့် ကောင်မလေးပါ
1 Oct 10, 13:37
Q: ကျွန်မ အသက် ၃၂ နှစ်ပါရှင့်။ Haemophilus influenza (Hib) နဲ့ Pneumococcal Conjugate (PCV7) က BCG (တီဘီ ကာကွယ်ဆေး) နဲ့ တူပါသလား။ USA မှာ BCG မရှိလို့ပါ။ သားလေးက ၁ နှစ် ၂ လ ရှိပါပြီ။ Hepatitis A ရော ထိုးဖို့ လိုပါသလား။ ဘယ်လို ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာ နိုင်ပါသလဲရှင့်။
• Pneumococcal Conjugate (PCV7) က Pneumococcal pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Bacteremia သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်တယ်။
• Haemophilus influenzae typeb(Hib) က Severe pneumonia ပြင်းထံတဲ့ နူမိုးနီးယား၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေး ရောင်ခြင်း ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။
• BCG ဆိုတဲ့ဆေးက TB ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။ တီဘီ ရှားလွန်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မထိုးပါ။ Hepatitis A အပါအဝင် တခြား ကလေး ကာကွယ်ဆေးတွေလဲ အဲလိုဘဲ။ နိုင်ငံတခုနဲ့တခုသာမက ပြည်နယ်တွေ့ပါ ထိုး-မထိုး မတူကြပါ။
2 Oct 10, 17:32
Q: ဆရာရှင့် နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ အဖြူရောင် အဖုသေးသေးလေးတွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ နှစ်နဲ့ချီ ကြာနေပါပြီ။ သေချာကြည့်မှမြင်ရပါတယ်။ လျာနဲ့ထိုးကြည့်ရင်း ကြမ်းပါတယ်။ အရမ်းလဲမများပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲ သိပါရစေ။
A: နှုတ်ခမ်း တဖက်လား၊ နှစ်ဖက်လား၊ ဆားဝက်ခြံ ဆိုတာ ရေးထားတယ်။ ဖတ်ပါ။ လိုရင် ထပ်မေးပါ။
2 Oct 10, 00:59
Q: Pelvic floor exercise က ဗိုက်ခွဲမွေးထားသူတွေကော လုပ်လို့ရပါသလားဆရာ။ ကျွန်မက ဗိုက်ခွဲမွေးထားလို့ပါ။ အိပ်ထောက်မတင်နည်းကော လုပ်လို့ရပါသလားဆရာ။
A: ကလေးဗိုက်ခွဲမွေးရင် ဗိုက်ရှေ့နံရံ နဲ့ သားအိမ်ရှေ့ပိုင်းတွေကို ခွဲစိတ်-ပြန်ချုပ် လုပ်ရတာပါ။ Pelvic floor exercise က သားအိမ်ကို မ-ထိန်း-ပင့်တင် ပေးထားတဲ့ ဘေးက ကြွက်သားတွေကို လုပ်ရတာပါ။ ခွဲစိတ်ပြီး နာတာခံ ခံနိုင်ရည် ရှိကတည်းက လုပ်လို့ရပါပြီ။ ခွဲစိတ်အပြီး ဆေးရုံမှာတင် အသက်ရှူ လေ့ကျင့်မှု၊ ခြေ-လက်လှုတ်ရှားမှု၊ စတာတွေ လူနာ အခြေအနေ အလိုက် လုပ်ရပါသေးတယ်။ တခြား ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတော့ ၁ လ ခွဲ နောက်မှာသာ လုပ်သင့်တယ်။ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရတာမျိုးဟာ တင်ပါးဆုံအတွင်းက အင်္ဂါတွေကို ညှစ်ထုတ်ပေးသလို မဖြစ်စေဘို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကနေ ထိန်းပေးထားရပါမယ်။
Oct 2, 2010 at 2:22 PM
Q: ကျမအသက်၂၂ နဲ့ ၂၃ ကြားမှာပါ။ ကျမ အိမ်ထောင်ကျတာ ၁ဝ လ လောက်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်မကျမီက ကျမ ကိုယ် အလေးချိန်ကီလို ၄၉ လောက်ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်း ကီလိုကျ ကျလာတာ ၄၄ လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျမ အရပ်က ၁၆၂ လောက်ရှိတယ်။ ကြည့်ရတာ တော်တော် ပိန်တယ်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်တားဆေးနဲ့ ပတ်သတ်မူ ရှိ မရှိ သိချင်လို့ပါ။ ကျမ အိမ်ထောင်ကျကတည်းက သုံးတဲ့ဆေးက mercilon 28 လုံးကဒ်ပါ။ ကျမနဲ့ မတည့်လို့ ပိန်တာ များလားပေါ့။ ကျမ ကီလိုကို ၅ဝ ကျော်လောက် ဖြစ်ချင်တယ်။ တစ်ချို့ တားဆေးတွေက တည့်ရင်ဝတယ်လို့ ကြားတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ပိန်တာဟာတားဆေးနဲ့ မဆိုင်ရင်လည်း ဝလာအောင် ဘယ်လို အားဆေးမျိုး သုံးစွဲရမလဲ။ ကေသီပန် သုံးစွဲရင်ရော ဝနိုင်ပါသလား။
• ကေသီပန်အကြောင်း ဆရာမသိပါ။
• မှန်ပါတယ်၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက တချို့ ပိန်၊ တချို့ ဝကြတယ်။ အခံဟော်မုန်း အနဲ-အများ မတူကြလို့ပါ။
• တားဆေး ပြောင်းသုံးနည်းက တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးနာမည် မတူတာ၊ ဆေးအမျိုးအစား မတူတာ ပြောင်းနိုင်တယ်။ ထိုးဆေး ပြောင်းသုံးနိုင်တယ်။ IUCD/Copper T သားအိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်တာ လုပ်နိုင်တယ်။ ကွန်ဒွမ်နည်းသုံးနိုင်တယ်။
• နောက်တခုက အလေးချိန်ကျနေတာ တခြားအကြောင်းတွေ စစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ တီဘီ။
• နောက်တခုက အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးနည်း။ ရေးပြီးသား စာတပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
3 Oct 10, 08:05
Q: ကျွန်မ Ecee2 ကို ၁၃ ကဒ်ခန့် သုံးစွဲပြီးပါပြီ။ ဒီပမာဏကြောင့် ဘယ်လို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။ ကျွန်မ ကလေးမရမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်ရှင့်။
A: Ecee2 ရဲ့ ပုံမှန် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့-အန်၊ အားယုတ်၊ ဗိုက်နာ၊ အစာမကျေ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ရင်သားနာ၊ သွေးဆင်းများ၊ ရာသီရက်ပြောင်း၊ သွေးဖိအား Blood pressure တက်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ မကြာခဏသုံးရင် ရာသီရက်မမှန်၊ ရာသီသွေး အနဲ-အများ မမှန်တာဖြစ်မယ်။ ဒီဆေးက မ-မျိုးဥထွက်မှာကို တားတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။ အကြာကြီး သုံးသူတွေကို သုတေသနလုပ်ထားတာ မတွေ့မိသေးပါ။
Q: I'm 17, male. What is the right or good healthy position of penis in underwear? When my penis is erect, it pointsalittle bend down towards the ground. In some photos I see that men put their penis up in underwear. I can’t do like that. I'm worried that this problem is caused by penis position in underwear. Please tell me what causes this. I do masturbate about4or5times inaweek for5years. Again, another question is that the foreskin. When the penis is not erect, the foreskin covers the whole gland. When erect, it covers half. I can pull the foreskin towards the body until the whole gland is pop outside. Is the penis is normal foraguy?
A: You areaperfect man. I mean normal. Not all are the same. When it comes to penis, it can be straight or curve downward or upward. It is perfect if it can be used correctly i.e. urination and intercourse. It is not photo show if you are not playboy model. That organ should lie comfortable inside the under ware whatever it likes. Let him choose.
Masturbation is normal. In most of the men and boy children the foreskin covers 2/3 of the glens. It is also OK if ½. Those who underwent circumcision it my cover less. The more it covers the better for protection. It should uncover the whole when necessary. You need to clean it more than the others.
Q: ဖြစ်တာကတော့ ကျွန်တော့် ကောင်မလေးပါ။ အသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ ချက်အောက်ဘယ်ဘက် ၄၅ ဒီဂရီ လက်လေးလုံး အကွာ လောက်မှာ နာတာလို့ ပြောပါတယ်။ အတွင်းထဲက နာတာမျိုးလို့ ပြောပါတယ်။ Google မှာ ပုံရှာကြည့်တော့ Fallopian tube နေရာလောက်ကလို့ ထင်တယ်။ နာတာက ၄ ရက်လောက် ရှိပြီလို့တော့ ပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ၁ လပိုင်းလောက်တုန်းကလည်း တစ်ခါ အဲလိုမျိုး ဖြစ်ဖူးသေးတယ်။ အဲတုန်းက ဆေးခန်းပြတာ ဆရာဝန်က ဥပြွန် ရောင်တယ်လို့ ပြောပြီး သောက်ဆေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သံချဆေး ၃ ရက် သောက်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒါဟာ ဘာရောဂါ ဖြစ်နိုင်လဲဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ၊ ဘာဆေးတွေ သောက်ဖို့ လိုအပ်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန်လေးတွေ ပြောပေးပါ။
A: အမျိုးသမီး အတော်များများ အဲဒါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျိုးဥ ဖြစ်ဖြစ် ပြွန်ဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ဖြစ်ဖြစ် မျိုးပွါးလမ်း တနေရာမှာ ရောင်တာပါ။ အဖြူဆင်းမယ်။ တချို့ နဲနဲ ဝါမယ်-စိမ်းမယ်။ ဆင်းတာက တချို့ ယားမယ်။ တချို့ အနံ့ရှိတယ်။ တချို့ ကျဲတယ်။ တချို့ ပြစ်တယ်။ ဆေးသောက် ပျောက်ပါတယ်။ ခဏခဏဖြစ်ရင်တော့ နောင် ကလေးရစေမှာကို ထိခိုက်တတ်တယ်။
ဆေးက Metronidazole စားဆေး တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်သောက်ပါ။ ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ထပ်သောက်ပါ။ မရသေးရင် Vaginal tablet မွေးလမ်းထဲထည့်ဆေး ထည့်ရတယ်။ Nistatin ဒါမှမဟုတ် Clotrimazole တမျိုးကို တညတခါ ၅-၆ ည ထည့်ပါ။ STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာဆိုရင် နောက်ထပ် စားဆေးလိုသေးတယ်။ အများဆုံးက ပြောထားပြီး ဆေး ၁ မျိုး။ ၂ မျိုးနဲ့ ကောင်းပါတယ်။ နာတာအတွက် Ibuprofen စားဆေး တခါသောက် ၁ ပြား၊ နာမှ သောက်ပါ။ တနေ့ ၃ ကြိမ် သောက်လို့ရတယ်။ အစာနဲ့ သောက်ပါ။ လိုသေးရင် မေးပါခင်ဗျား။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:23 PM